पूँजी वृद्धि के हो | अर्थव्यवस्था वित्त
जब हामी त्यो सुन्छौं कम्पनीले पूरा गरेको छ वा पूंजी वृद्धिको खोजी गर्दैछ, हामी आइब्याक्स EX on मा रहेको कम्पनी, वा कुनै पनि देशको स्टक मार्केटमा आफ्नो गतिविधि सुरू गरेको कम्पनीको कल्पना गर्छौं। यस बाहेक अरू केहि पनि छैन। तर यो त्यस्तो छैन। बुझ्नलाई यसको अर्थ के हो, कसरी र किन पूंजी बढाइन्छ, यसलाई पहिले बढाउनुको मतलब हामीले बुझ्नु पर्छ।
जब हामी पूँजी वृद्धिको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी कुरा गर्छौं कम्पनी को कुल शेयर पूंजी बढ्नेछ, जुन यो लिनको लागि ठूलो कम्पनी हुनुपर्दैन, वास्तवमा सबै निगमहरू र सीमित दायित्व कम्पनीहरूको न्यूनतम शेयर पूंजी हुन्छ।
1 सामाजिक पूंजी के हो?
2 पूंजी वृद्धि भनेको के हो?
3 प्रश्न यो छ: किन एक व्यवसाय लाई वित्तिय आवश्यकता छ?
4 कम्पनीको सेयर पूँजी बढाउने फाइदा
5 पूंजी बढाउन कहिले?
6 पूंजी वृद्धि कसरी गरिन्छ?
7 डरलाग्दो पत्राउने प्रभाव
सामाजिक पूंजी के हो?
एउटा कम्पनीसँग सामानको सेट हुन्छ जुन यसलाई मूल्य दिन्छ। सामाजिक पूंजी भएको छ सामान र पैसाको सेट जुन एक कम्पनीले स्वामित्व राख्दछ, सामान्यतया सेयरमा प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन सम्पत्ति शीर्षकहरू पंजीकृत हुन्छन्।
El सामाजिक पूंजीले आर्थिक मूल्यलाई दर्शाउँछ यसको सुरूवातको लागि कम्पनीको। हुन, स्पेनमा, को लागि 3005.60 XNUMX को सीमित र एकमात्र स्वामित्व, लागि सार्वजनिक सीमित कम्पनीहरू € 60.101.20 हो व्यक्तिगत सेयरमा विभाजित।
धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरू गर्न उल्लेख गरिएको न्यूनतम पूरा गर्दछ, र यसलाई सार्दैन, तर प्रारम्भिक मान माथि वा तल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। पछि हामी हेर्ने छौं कि यो कसरी र किन गरियो।
यसैले सेयर वा शीर्षकका प्रत्येक धारकलाई शेयर होल्डर वा पार्टनर भनिन्छ, जसले कम्पनीको सम्पत्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ। तसर्थ, लेखा उद्देश्यका लागि, पूंजीगत शेयर साझेदारहरूको सम्मानमा एक isण हो।
साझेदार वा सेयर होल्डरहरू विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्:
सामान्य साझेदारहरू, जो कम्पनीका निर्णयहरूमा भाग लिन्छन् र कम्पनीको नाफा वा नोक्सानमा आफ्नो पूंजी जोखिममा राख्छन्
मनपर्ने साथीहरू, जसले पूंजी योगदान गर्दछ, र नाफा / घाटा प्राप्त गर्दछ तर कम्पनीको निर्णयहरूमा भाग लिदैन।
सेयर पूंजी कम्पनी घाटाबाट प्रभावित हुँदैन, तर घटाउन वा बढाउन सकिन्छ, हामी यस बारे पछि अझ बढी हेर्नेछौं।
सामाजिक पूंजी के हो भन्ने बारे स्पष्ट हुँदै, हामी बुझ्दछौं कि पूंजी वृद्धि कम्पनीलाई अधिक मूल्य र सम्पत्ति प्रदान गर्न ठीकसँग हो। यो गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् र फाइदाहरू जुन हामी तल हेर्नेछौं।
व्यापारको मूल्य बढाउनका लागि दुई विशेष तरिकाहरू छन्:
साझेदार वा नयाँ साझेदारहरूलाई नयाँ सेयरहरू जारी गर्नुहोस्, वा, पहिले नै जारी गरिएको सेयरको मूल्य बढाउँदै। कम्पनीको उद्देश्यमा निर्भर गर्दै, तपाईं एक विकल्प वा अर्कोमा निर्णय गर्नुहुन्छ: नयाँ साझेदारहरू सँधै खोजी हुँदैनन्।
दोस्रो मामला मा, यो सरल छ सेयरको नाममात्र मूल्य बढाउँदछयसैले, एक कम्पनीको मूल्य शेयरधारकहरूको पूंजी खर्च बिना नै बढ्छ।
प्रश्न यो छ: किन एक व्यवसाय लाई वित्तिय आवश्यकता छ?
ठूलो वा सानो कम्पनी, पूंजी प्रवाह र बहिर्गमनको लगातार बृद्धि प्रवाह शामेल छ, जबसम्म इनपुट आउटपुट पैसा भन्दा बढी हुन्छ। ब्यापारले कार्य गर्नका लागि यसलाई काम गर्नको लागि फर्नीचर, उपकरण, कर्मचारी र कच्चा माल आवश्यक पर्दछ। यो गर्नका लागि तपाईलाई सेयरधारक वा साझेदार चाहिन्छ।
यस कम्पनीले यति राम्रो गरिरहेको छ कि प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल गर्न र नाफा बढाउनको लागि स्पेन भित्र वा बाहिर शाखा खोल्न आवश्यक छ। अन्य व्यवसाय खोल्दा परिसर, उपकरणहरू र सबै कुरामा फेरि खर्च आउँछ, त्यसैले पैसा चाहिन्छ, कहिलेकाँही धेरै पैसा।
कम्पनीसँग दुई विकल्पहरू छन्: बैंकबाट forणको लागि सोध्नुहोस्, र तिनीहरूको सम्बन्धित रूचि संग तिर्न, वा, एक पूंजी वृद्धि को माध्यम बाट पैसा प्राप्त, कम्पनी मा पैसा छोड्ने नयाँ साझेदारहरु को ढोका खोल्न।
दोस्रो विकल्प पनि loanणको एक प्रकार होखैर, लेखा शर्तमा, सबै पूंजीगत शेयर हो, हामीले भनेझैं कम्पनीका साझेदारहरूलाई toण। यो बैंक loanणको भन्दा कम लागतको साथ एक विकल्प हो, र कम्पनीले गर्ने जोखिमहरू र नयाँ साझेदारहरूलाई फकाउन मनाउने शक्तिमा मात्र निर्भर गर्दछ।
कम्पनीको सेयर पूँजी बढाउने फाइदा
ब्याज बिना पैसा पाउनुहोस्
हामीले यसलाई पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं: पूंजी उठाउँदा ब्याज भुक्तान गर्न र सम्पत्ति धितो राख्नबाट कम्पनीलाई रोक्दछ। यो "शून्य लागत" मा पैसा हो। यो व्यापार विस्तार गर्न आवश्यक छैन: तपाईं यसलाई मार्केटिंग अभियानहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, राम्रो योग्य कर्मचारीहरूमा, नयाँ उत्पादनहरू वा सेवाहरूको विकासमा, वा केवल तपाईंको सुधार भएकोमा।
कम्पनीको मान बढाउनुहोस्
कम्पनी मात्र होईन पूँजी वृद्धिमा लगानी गर्न बढी पैसा हुन्छ, तर कम्पनीको रूपमा यसको मूल्य बढ्छ। यसले नैतिक रूपमा बोल्ने मात्र नभई आर्थिक हिसाबले अझ बढी र अधिक क्रेडिट अवसरहरू पहुँच गर्न सक्दछ किनकि तपाईं राम्रो वित्तीय स्वास्थ्यको आनन्द लिनुहुन्छ।
उदाहरण दिनको लागि: € १,150.000,००० को शेयर पूंजी रहेको कम्पनीमा accessण पहुँच गर्न सजिलो छ, minimum ,60.000०,००० को कानूनी न्यूनतमसँग जाने भन्दा।
यो एक उच्च प्रतिष्ठा छ
कुनै श doubt्का बिना, ठूलो वा सानो कम्पनी, त्यो गर्छ ठूलो वृद्धिले तपाईंको छविमा ठूलो सुधार गर्दछ, तपाईंको ब्रान्ड आपूर्तिकर्ताको अगाडि र ग्राहकहरूको साथ पनि मूल्यवान छ।
पूंजी बढाउन कहिले?
हामीले पहिले भनेजस्तै, धेरै जसो एसएमई कानूनी न्यूनतम संग स्थापित हुन्छन्, र बिस्तारै उनीहरूले पूँजी बढाउँछन्, यदि सबै भए पनि, किनभने सुरुको रकम कम्पनीको कामसँग थोरै हुँदै गइरहेको छ।
विज्ञहरू भन्छन् कि धेरै व्यवसायहरूलाई कहिले यो बढाउने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, वा कानूनी न्यूनतमसँग व्यवसाय सुरु गर्नु पहिले नै व्यवसायमा गल्ती हो र यसले चाँडै वा पछि यसलाई चिह्न लगाउँछ।
व्यापार विज्ञहरु आश्वासन दिन्छन् कि त्यहाँ कम्तिमा चार पलहरु छन् जसमा सेयर पूंजीको बृद्धि लगभग अनिवार्य हुन्छ, जुन:
१. जब त्यहाँ वृद्धि अवसरहरू छन्। पूंजी अभावका कारण शोषण गर्न नसकिने व्यापारका अवसरहरू छन्। सामान्यतया, जो कोहीले जोखिमको केही स्तरहरूको साथ व्यवसाय अवसरमा loansण लिन सक्दैन, र व्यापार प्रभावित वा स्थिर छ। यो क्षण कम्पनीको मूल्य बढाउनको लागि आदर्श हो, कुनै बैंकमा ब्याज तिर्नु पर्दैन।
२. जब मूल्य सहि छ। तपाईंलाई यस सम्बन्धमा सल्लाह आवश्यक पर्न सक्छ: कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंलाई आफ्नो कम्पनीमा लगानी गर्न १०,००,००० डलर आवश्यक छ, र यसलाई प्राप्त गर्न लाग्ने लागत तपाईंको कम्पनीको २०% हो। सायद अर्को वर्ष, ती १००००० लाई पाउनुहोस्, उनीहरूले तपाईंको कम्पनीको% 100.000% प्रतिनिधित्व गर्छन्। विज्ञहरू आश्वासन दिन्छन् कि सब भन्दा राम्रो क्षण हो जब ब्याज मूल्य बराबर हुन्छ।
Your. जब तपाइँको कम्पनीले समय किन्न आवश्यक छ। वित्त विज्ञहरू गणना गर्छन् कि धेरै कम्पनीहरूको पहिलो तीन वर्ष घाटामा काम गर्छन्, त्यो हो, यो समय हो जुन लगानी सामान्यतया वसूली गरिन्छ र कम्पनी बनाउनको लागि debtsण भुक्तान गरिन्छ। यदि तपाईं त्यो लामो प्रतीक्षा गर्न चाहनुहुन्न, वा व्यापार ढिलो छ भने, साझेदारहरू खोज्न वा कम्पनीको पूंजी बढाउनु र त्यो समय घटाउनु राम्रो विचार हो। तर यो इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्दछ, किनकि यदि तपाईको व्यापार असफल भयो भने तपाईले गहिरो कूवामा प्रवेश गर्ने जोखिम लिनुहुन्छ।
Advice. जब सल्लाह चाहिन्छ। नयाँ पार्टनरलाई कम्पनीको ढोका खोल्नु भनेको पैसाको प्रश्न मात्र होईन। कहिलेकाँही ढोका विशिष्ट लगानीकर्ताहरू वा साझेदारहरूको लागि खोलिन्छ किनभने उनीहरूसँग साझेदारहरूको भन्दा बढी अनुभव र पृष्ठभूमि ल्याउँदछ, जसले उनीहरूलाई राम्रो निर्णय लिन मद्दत गर्दछ। तिनीहरू "गाईड" पार्टनर हुन्, लगानीकर्ता भन्दा।
पूंजी वृद्धि कसरी गरिन्छ?
पूंजी वृद्धि यो महत्त्वपूर्ण छ, यसले कम्पनीको नियमहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउन क्रमबद्ध प्रक्रियाहरू पछ्याउनुपर्दछ, कम्पनीका साझेदारहरू र लेनदारहरूको लागि ग्यारेन्टी प्रस्ताव।
विशिष्ट हुन, यो तीन चरणहरूमा गरिन्छ:
१. कम्पनीको साधारण बैठकको सम्झौता
पूँजी शेयरमा बृद्धि दर्ता गर्नुहोस्
पहिलो, योजनाको एजेन्डाको साथ विस्तारमा बोर्डका निर्देशक वा शेयरधारकहरूको अध्यक्षको प्रस्ताव हुनु पर्दछ। यद्यपि पूंजी शेयरको मूल्यको कम्तिमा%% का कुनै पनि धारक।
कम्पनीको पूंजी शेयरको आधा भन्दा बढी धारकहरूले पूँजी बृद्धिलाई अनुमोदन गर्न अनिवार्य छ नयाँ साझेदारहरु को प्रवेश को माध्यम बाट, र आफ्नो समग्रता को पहिले नै जारी शेयर को मूल्य को वृद्धि गर्न।
त्यसो भए, यो रेकर्ड गर्न अनिवार्य छ, यदि त्यहाँ कुनै लगानी छ भने, मर्कन्टाइल रेजिस्ट्रीमा र यसको सम्बन्धित प्रकाशन BORME (मर्कन्टाइल रजिस्ट्रीको आधिकारिक ग्याजेट) मा, जुन BOE जस्तो छ।
डरलाग्दो पत्राउने प्रभाव
सबै कुराको जोखिम हुन्छ, र ठूलो पूंजी पनि बढ्छ, र ती मध्ये एउटा तथाकथित "पूँजी कमजोरपन" हो। यो शेष कम्तिमा एक साझेदार को सम्पत्ती को घाटा संकेत गर्दछ, सदस्यता लिन वा यो हकदार हो तर साझेदारी गर्न खरीद गर्न सक्षम नभएको लागि।
यो उदाहरणको साथ सजिलो छ: स्पेन SA का partners साझेदार र ,4 १००,००० छ, बराबर भागमा, अर्थात् € २,100.000,००० प्रत्येकमा, प्रत्येकको € १ को मूल्यको साथ सेयरमा।
तिनीहरू कम्पनीको मूल्यलाई double २००,००० डलर गर्न चाहान्छन्, र नयाँ साझेदारहरू नगर्ने निर्णय गर्छन्, तर तिनीहरू आफैंमा। यो सबैलाई € 200.000 लगानी गर्न आवश्यक छ कि बाहिर जान्छ। तर दुई सँग कुनै स्रोत छैन, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो € २ .,००० को हिस्सेदारी राख्छन्, र अर्को दुई € ,25.000०,००० को साथ।
दुई साझेदारहरूले २ ownership% बाट १२..25% मा स्वामित्व घटाए, जसले गर्दा कम्पनीको फाइदा र निर्णयहरूमा उनीहरूको शक्ति कमजोर हुन्छ।
कम्पनीहरु, आवश्यक मा जानु बिना स्टक एक्सचेन्ज मा आफ्नो सेयरको बिक्री, उनीहरु आफ्नो शेयर पूंजी वृद्धि गरेर आय प्राप्त गर्न सक्छन्, र यसैले यसलाई नयाँ अधिग्रहण, कर्मचारी वा उपकरणमा लगानी गर्न सक्षम हुनुहोस्।
यो सहि समयमै गर्नु महत्वपूर्ण छ, ताकि कम्पनी स्थिर नहोस्, यद्यपि यो सावधानीपूर्वक गरिनुपर्दछ, किनकि पूँजी कमजोरपनको जोखिम छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कम्पनीहरु » पूंजी वृद्धि भनेको के हो?
२०१ 2016 मा शेयर बजारमा तपाईंको लगानी कसरी सामना गर्ने?
Magi ले लगानीकर्ताहरुलाई के उपहार ल्याउन सक्छ?